မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Minghe Casting - Minghe Casting
အသစ်သော Cast Casting လက်ခံခြင်းအကြောင်းအရာ
၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်အားလုံးရှုထောင့်အဘယ်သူမျှမသက်ဆိုင်ရာနားလည်မှုမရှိသောကြောင့်အသစ်သောသေ - သွန်းမှိုအရပျ၌တည်ရှိ၏အခါ, ကလက်ခံစဉ်အတွင်းအောက်ပါအကြောင်းအရာအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။
မှိုလိုင်အမှားတန်ဖိုး≤ 0.1mm (လိုင်ပတ်လည်မှာထစ်ကိုစစ်ဆေး)?
ရွေ့လျား။ ပုံသေသောဖောင်ဒေးရှင်းသည် ၀.၂၂ မှ ၀.၀၆ မီလီမီတာရှိပါသလား။
ပုံသဏ္baseာန်၊ ထိပ်ပန်းကန်၊ ပါးလွှာသောတပ်ဆင်ခြင်းပန်းကန်နှင့်မှိုခြေထောက်ပေါ်ရှိကွင်းအပေါက်များစီစဉ်ခြင်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီးအဆင်ပြေပါသလား။
ပထမ ဦး စွာသင်သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိပေးသွင်းသူများထံမှစျေးနှုန်းချိုသာစွာရနိုင်သည်။ တရုတ်မှာလုံးဝနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းမရှိပါဘူး စျေးနှုန်းတစ်ခုတည်းကတစ်ခုတည်းသာရှိပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ မကောင်းတဲ့ပြproblemsနာအမျိုးမျိုးနဲ့စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ထုတ်လုပ်မှုရဲ့မမှန်ကန်တဲ့ကတိက ၀ တ်တွေကိုသင်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်။ သူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းကကျွန်ုပ်တို့ထက် ၁ ဒေါ်လာသက်သာတယ်၊ သင်ဟာဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ကိုပီစီ ၁၀၀၀၀ မှာရနိုင်တယ်။ သို့သော်သင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ကျော်အရှုံးပေါ်လိမ့်မည်။ စက်မှုမအောင်မြင်ပါကသစ္စာရှိဖောက်သည်တစ် ဦး ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ၀.၅ မှ ၁ ဒေါ်လာအထိနိမ့်သောစျေးနှုန်းကိုရသောအခါသင်သည် ၀ ယ်လိုအား၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုမြင့်မားစွာရနိုင်သည်ဟုမထင်ပါ။ စျေးနှုန်း elasticity သည်ကွဲပြားသော ၀ န်ဆောင်မှုပေါ်မူတည်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်သင်သည်ကုန်ကျစရိတ်ထက်ပင်နည်းသောကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုကိုပေးနိုင်ပါကသင်တင်သွင်းသောကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ မင်းဒါကိုမင်းဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲ
အကယ်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကသင်သည်ကျွန်ုပ်အားဖုန်းဆက်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအမြန်ဆုံးပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမည်။
ပထမ ဦး စွာဖောက်သည်သည်သင်၏နမူနာသို့မဟုတ်ပုံဆွဲခြင်းဖြစ်သည့် 2D နှင့် 3D ပုံဆွဲခြင်း (IGS သို့မဟုတ် STP format) ပေးပို့နိုင်သည်။
ကျွနု်ပ်တို့စက်ရုံသည်ကွမ်ကျိုးနှင့်ရှန်ကျန်းမြို့အနီးအလွန်လှပသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သော Dongguan တွင်တည်ရှိသည်။ သင်သည် Shenzhen Bao'an အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် (သို့မဟုတ် ZGSZ) သို့ Guangzhou Baiyun အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် (ZGGG) သို့ပျံသန်းနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လေဆိပ်တွင်သင်တက်မည်။
ဘယ်လိုသတ္တုတွေ၊ သွပ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကိုသင် Casting သေဆုံးသနည်း။
အစိတ်အပိုင်းများ - ကားများ၊ စက်ဘီးများ၊ လေယာဉ်၊ တေးဂီတတူရိယာများ၊ ရေယာဉ်၊ Optical ကိရိယာများ၊ အာရုံခံကိရိယာများ၊ မော်ဒယ်များ၊ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၊ ပန်းပု၊ အသံချဲ့စက်၊ အားကစားပစ္စည်းကိရိယာ, ကိရိယာတန်ဆာပလာ၊ အရုပ်နှင့်အခြားအရာများ။
ISO9001 / TS16949 Die Cast ကုမ္ပဏီ
လေဟာနယ် Aluminum Die Casting, Powder Coating
ကန့်သတ် porosities ဖိအား Die Casting အစိတ်အပိုင်းများ
CMM၊ အိမ်အတွင်းရှိ X-Ray စစ်ဆေးရေးပစ္စည်းကိရိယာ
1mm- 1600mm အရွယ်ရှိ CNC စက် ၀ န်ဆောင်မှု
Metal Rapid ရှေ့ပြေးပုံစံဖြင့်အသေးစား
Die Casting | လူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းကို (Extrusion) | သဲ Casting | ပုံနှိပ်ခြင်း
သေဆုံးသောသတ္တုများပုံသွန်းခြင်းနှင့် cnc machining စသည်တို့ကိုသို့မဟုတ်အသေးစားအော်ဒါနမူနာများကိုများသောအားဖြင့် TNT, FEDEX, UPS စသည်တို့ကပေးပို့ပြီးဖောက်သည်များအတည်ပြုပြီးနောက်မှာကြီးမားသောအမှာစာကိုလေနှင့်ပင်လယ်တို့မှပေးပို့သည်။
ဒါ့အပြင် scratch.it ရဲ့goodုံကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်
အကယ်၍ သင်သဘောတူနိုင်လျှင်သေစေနိုင်သောပြproblemနာမဟုတ်ဘဲ၊ သန်းပေါင်းများစွာသောပစ္စည်းများဖြုန်းတီးခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ
Die Casting မှိုငွေပေးချေခြင်း - ကန်ထရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက် ၄၀% ကြိုတင်ငွေပေးချေမှု၊
ဝယ်ယူသူမှမှိုခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင် ၆၀% လက်ကျန်ငွေကိုပေးလိမ့်မည်။
သွန်းလောင်းရန်အမိန့်ပေးချေမှုသက်တမ်း - T / T၊ ၃၀% ကို T / T မှထုတ်လုပ်မှုမပြုမီပေးချေရမည်၊ ၇၀% ကိုမပို့မီပေးချေရမည်။
IGS, DWG, STEP ဖိုင်စသည်ဖြင့်ပုံဆွဲ။ ပို့ပေးပါ။ ပုံဆွဲခြင်းမရှိပါကနမူနာသည်အဆင်ပြေပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သင်သရုပ်ဆောင်ရန်ပို့ပေးပါမည်။ ဤအတောအတွင်းပုံဆွဲခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကတိတော်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမည်။
သေဆုံးရန်အတွက် - ဤစီမံကိန်းသစ်ကြီးထွားလာခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကလက်ခံနိုင်သောအသံပမာဏကိုလက်ခံသည်။ အထွေထွေ guality: 500 PCs
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွက် - ဤစီမံကိန်းသစ်ကြီးထွားလာခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကလက်ခံနိုင်သောအသံပမာဏကိုလက်ခံသည်။ အထွေထွေ guality: 500 PCs
သဲသောင်ပြင်အတွက် - ဤစီမံကိန်းသစ်ကြီးထွားလာခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကလက်ခံနိုင်သောအသံပမာဏကိုလက်ခံသည်။ အထွေထွေ guality: 500 PCs
အဘယ်သူမျှမ moq cnc စက်သည်
စိတ်မကောင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဖောက်သည်မှအတည်ပြုသောအပိုင်းကိုသာပြသပါမည်၊ သို့မဟုတ်ရှေးအကျဆုံးပုံစံအချို့ကိုသာပြပါ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ NDA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးစက်ရုံနှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၏စွမ်းရည်ကိုသာပြသသောကြောင့် - သွန်းလောင်းသောတရုတ်၊ CNC စက်တရုတ်၊ Assembly
www.diecastingcompany.com လာရောက်လည်ပတ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟောင်ကောင်၊ ရှန်ကျန်းလေဆိပ်၊ Dongguan Humen အမြန်ရထားဘူတာရုံအနီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ။
သေလွန်သောသတ္တုများပုံသွန်းလောင်းပေးစက် cnc စက် fatory ကိုရှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ကိုလာလည်ပတ်ရန်ကြိုဆိုပါသည်။ HK မှ Dongguan သို့အလွန်အဆင်ပြေသည်။
Pick-up နှင့်ဟိုတယ်ကြိုတင်မှာယူခြင်းအတွက်ကူညီပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါသည်။
1. သွန်းလောင်း၏ပစ္စည်း: Lee KEE Group မှလူမီနီယံ & သွပ်နှင့်စသည်တို့
2. Die Casting စက်: LK GROUP, YIZHIMI Group, lijie
၃။ စိမ်းလန်းသောစွမ်းအင်ကို အသုံးပြု၍ ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်ပါ။ Huawei၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား - Minghe Casting အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုရွေးချယ်ပါ။
4, Die Casting မှို: ကြီးမားသောအရွယ်အစားနှင့် 50000 ကျော်ရိုက်ချက်များသည်သက်တမ်းကိုကြာရှည်စေသည်။
5. စစ်ဆေးရေးပစ္စည်းကိရိယာများ: CMM
ကျနော်တို့သေသတ္တုများပုံသွန်း, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသတ္တုများပုံသွန်း, သဲ Casting, CNC စက်, Assembly.learn ပိုပြီးတရုတ်ပုံသွန်း manufactring ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။
အခေါင်းပေါက်တစ်ခုတည်းတွင်ရှင်းပြရန်မလိုအပ်ပါ။ အခေါင်းပေါင်းများစွာတွင်တူညီသည့်အခေါင်းများစွာရှိသည်။ သေဆုံးသည့်ပုံစံသည်မတူကွဲပြားသောပုံစံများရှိပါက၎င်းကိုပေါင်းစပ်ခြင်းသို့မဟုတ်မိသားစုသေဆုံးခြင်းဟုခေါ်သည်။ ပေါင်းစပ်သေဆုံးခြင်းကိုတပ်ဆင်ရန်အတွက်အစိတ်အပိုင်းများစွာထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ရိုးရှင်းသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ယူနစ်သေများကိုကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစီးပွားရေးကိုအကျိုးသက်ရောက်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အမျိုးမျိုးသောဖောက်သည်များအတွက်တပ်ဆင်ရန်အတွက်အစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်တပ်ဆင်။ သေဆုံးသည်။ ယူနစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအရာများအားဘုံသိုလှောင်ထားသည့်နေရာတွင်စုဝေးပြီးအပြေးသမားများကဘုံအဖွင့်သို့မဟုတ်အပေါက်ပေါက်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဤသည်အားလုံးလိုင်၏တစ်ပြိုင်နက်ဖြည့်ခွင့်ပြုသည်။
Casting Dies နှင့်၎င်းတို့၏ဆောက်လုပ်ရေး
Die casting dies များသည်အနည်းဆုံးအပိုင်း ၂ ပိုင်းတွင်အသေခံတစ်ဝက်နှင့် ejector die half ဟုခေါ်သောအလွိုင်းသုံးသံမဏိများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ပုံသေသေတ္တာတစ်ဝက်ကိုအရည်ပျော်သောသတ္တုဆေးထိုးမှုစနစ်ဆီသို့ဘက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ထုတ်လွှင့်သူသည်တစ်ဝက်သေဆုံးသည်။ ၎င်းမှသေသောသတ္တုများပုံသဏ္adာန်သည်ကပ်လျက်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်သေ။ ဖွင့်သောအခါထုတ်ပစ်သည့်အရာမှစက်၏ရွေ့လျားနေသောကျောက်ပြားပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။
ပုံသေသေဆုံးသောတစ်ဝက်သည်သွန်းသောအပေါက်များပါ ၀ င်ပြီးအရည်ပျော်သောသတ္တုသည်သေထဲသို့ဝင်သည်။ ထုထည်၏ထက်ဝက်သည်များသောအားဖြင့်သတ္တုသွန်းသောသန္ဓေသားအားအခေါင်းပေါက်သို့သွားသောလမ်းကြောင်း (အကူးအပြောင်းလမ်းများ) နှင့်ဂိတ်များ (ဝင်ပေါက်များ) ပါရှိသည်။ ထုထည်တဝက်သည်သေဆုံးသူမှထုတ်ပစ်ရန်ယန္တရားရှိသောအိမ်မြှောင်သေတ္တာတစ်ခုနှင့်လည်းချိတ်ဆက်ထားသည်။ ထုတ်လွှင့်ပန်းကန်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်တံသင်သည်အခေါင်းပေါက်မှသံချွန်ကိုရှေ့သို့ရွေ့သောအခါထုတ်ပစ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤသည်များသောအားဖြင့်စက်၏အဖွင့်လေဖြတ်ခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထုတ်လွှတ်တံသင်နေရာချထားမှုကိုဂရုတစိုက်စီစဉ်ထားရမည်၊ ထို့ကြောင့်ထုတ်လွှတ်မှုအတွင်းပုံပေါ်ထားသည့်အင်အားသည်ပုံပျက်သောအခြေအနေသို့ရောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ejector plate နှင့်ချိတ်ထားသော return pins သည်ဒီအပြားကို casting အနေအထားသို့ပြန်သွားပါ။
Fixed နှင့်ရွေ့လျား cores များကိုမကြာခဏသေလေ့ရှိသည်။ အကယ်၍ ပုံသေတပ်ဆင်ထားပါကအဓိက ၀ င်ရိုးသည်အဖွင့်အဖွင့်လမ်းညွှန်နှင့်အပြိုင်ဖြစ်ရမည်။ ရွေ့လျားနိုင်ပါက၎င်းတို့သည်အဓိကဆလိုက်များနှင့်တွဲလေ့ရှိသည်။ အကယ်၍ သေပုံသွန်းသောဒီဇိုင်း၏ဘေးထွက်သည်စိတ်ဓာတ်ကျရန်လိုအပ်သည်ဆိုပါကသေတ္တာသည်သေနေသောအခေါင်းပေါက်မှထုတ်ပစ်ခြင်းကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲလိုချင်သောရလဒ်ရရှိရန်ဆလိုက်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောဆလိုက်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ရွေ့လျားနိုင်သောဆလိုက်များနှင့် cores များအားလုံးကိုဂရုတစိုက်တပ်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်ပြီးသတ္တုများပုံသွန်းစဉ်ကာလအတွင်းလုံခြုံစွာသော့ခတ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိရမည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်၊ သွပ်ရည်ကိုသူတို့ရဲ့ slideways တွေထဲကိုအတင်းအကျပ်ပို့ဆောင်ပြီးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပြတ်တောက်စေနိုင်တယ်။ ဆလိုက်များနှင့် cores များသည်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များကိုပိုမိုမြင့်မားစေသော်လည်း၎င်းတို့သည်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးမျိုးသောသတ္တုထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များထက်များသောအားဖြင့်သွန်းလောင်းခြင်းကိုထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
အအေးခန်းစက်များသည်အပူပေးသောစက်များနှင့်အဓိကကွာခြားသည်။ အဆိုပါဆေးထိုး planer နှင့်ဆလင်ဒါအရည်ပျော်သတ္တု၌နစ်မြုပ်ကြသည်မဟုတ်။ အရည်ပျော်သောသတ္တုတစ်မျိုးသည်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုမှတစ်ခုသို့မဟုတ်အအေးခန်းထဲကိုလက်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အလိုအလျောက်အပ်စက်ဖြင့်ဖြစ်စေ“ အေးသောအခန်း” ထဲသို့သွန်းလောင်းသည်။ ရှေ့သို့တိုး။ ၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ဖြင့်လည်ပတ်သောရေကူးကန်ကိုမြင့်မားသောဖိအားပေးမှုဖြင့်သတ္တုအားအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးသည့်ဆိပ်ကမ်းကိုတံဆိပ်ခတ်သည်။ Injection pressure သည်အလူမီနီယမ်နှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုစပ်အတွက် ၃၀၀၀ မှ ၁၀၀၀၀ psi အထိနှင့်ကြေးနီအောက်ခံသတ္တုစပ်အတွက် ၆၀၀၀ မှ ၁၅၀၀၀ psi အထိရှိသည်။
ပုံ ၂ - အအေးခန်းစက်။ အအေးခန်းနှင့်အလျားလိုက်သိုးသို့မဟုတ် planer (အားသွင်းအနေအထား) ကိုပုံကြမ်းဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။
အအေးခန်းထဲရှိအအေးခံစက်တွင်သေသောအခေါင်းပေါက်ကိုဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်ထက်ပိုမိုသောအရည်ပျော်သတ္တုကိုအခန်းထဲသို့သွန်းသည်။ ၎င်းသည်လိုင်ခေါင်းဖြင့်သတ္တုစပ်ကိုခိုင်မာစွာထုပ်ပိုးရန်လုံလောက်သောဖိအားကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ပိုလျှံသတ္တုသတ္တုများပုံသွန်းနှင့်အတူထုတ်ပစ်သည်နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောရိုက်ချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အအေးခန်းစက်လည်ပတ်မှုကြောင့်“ အအေးခန်း” စက်၏လည်ပတ်မှုသည်“ ပူပြင်းသည့်အခန်း” ထက်အနည်းငယ်နှေးသည်။ အပူချိန်မြင့်အရည်ပျော်မှတ်သတ္တုစပ်အတွက်သတ္တုစပ်အတွက်အအေးခန်းစက်ကိုအသုံးပြုသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့သွန်းသောဒြပ်ပေါင်းများတွင်ရေမ ၀ င်သောကြောင့်၊
Hot Chamber စက်များဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း
အပူပေးစက်များသည်အဓိကအားဖြင့်သွပ်များအတွက်အသုံးပြုပြီးသတ္တုအိုးများ၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်အဆင့်မြင့်သောအပူချိန်မြင့်သောပစ္စည်းများအသစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည်ဤပစ္စည်းကိရိယာများကိုမဂ္ဂနီစီယမ်သတ္တုစပ်အတွက်တိုးချဲ့ထားသည်။ ပုံ ၁ - ကုန်သည်ကြီးများအသင်း ပုံကြမ်းသည်သွပ်သတ္တုဖြင့်နစ်မြုပ်နေသောရေပိုက်ယန္တရားကိုဖော်ပြသည်။ ခေတ်မီစက်များကိုဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်ဖြင့်လည်ပတ်ပြီးအလိုအလျောက်စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်လုံခြုံရေးကိရိယာများတပ်ဆင်ထားသည်။
ပူပြင်းတဲ့အခန်းထဲကစက်ထဲမှာ၊ ဆေးထိုးယန္တရားကစက်နဲ့တွဲထားတဲ့မီးဖိုထဲမှာအရည်ပျော်တဲ့သတ္တုတွေထဲနှစ်မြှုပ်ထားတယ်။ ဆိပ်ကမ်းကိုမြှောက်လိုက်သည်နှင့်ဆလင်ဒါတွင်အရည်ပျော်သောသတ္တုများကိုခွင့်ပြုသည့်ဆိပ်ကမ်းဖွင့်လှစ်သည်။ ဆိပ်ကမ်းကိုတံဆိပ်ခတ်ထားသည့် planung သည်အောက်သို့ရွေ့လျားသွားသောအခါ၎င်းသည် gooseneck မှတဆင့်အရည်ပျော်သောသတ္တုများကိုတွန်းထုတ်ပြီးသေထဲသို့တွင်းထဲသို့ထည့်သည်။ သတ္တုသည်အရည်ပျော်သွားသောအခါဆည်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပြီးသေဆုံးသည်။
ပူပြင်းတဲ့အခန်းထဲကစက်တွေဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲ။ အလေးချိန်တစ်ပေါင်ထက်နည်းသောအလေးချိန်လေးသည်ပေါင်များစွာသွန်းရန်အတွက်သေးငယ်သည့်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်စက်ဘီးအချိန်သည်တစ်စက္ကန့်ထက်မနည်းပါ။ သေခြင်းသည်လျင်မြန်စွာ (ပုံမှန်အားဖြင့် ၅ မှ ၄၀ မီလီစက္ကန့်အကြား) တွင်ရှိပြီးသတ္တုသည်မြင့်မားသောဖိအားများ (၁,၅၀၀ မှ ၄,၅၀၀ ကျော် psi) အတွင်းထိုးသွင်းသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ခေတ်သစ်နည်းပညာသည်ဤတန်ဖိုးများကိုအနီးကပ်ထိန်းချုပ်ပေးသည်။
Die Casting အတွက်စက်အမျိုးအစားများ
အသုံးပြုသောစက်အမျိုးအစားမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူသံမဏိ၊ သံကြိုးနှင့် / သို့မဟုတ်အခြားရွေ့လျားနိုင်သောအပိုင်းများကိုသတ္တုစပ်ပုံသဏ္duringာန်အတွင်းလုံခြုံစွာသော့ခတ်ထားရန်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စက်၏ညှပ်အားကို (က) သတ္တုများပုံသွန်းလောင်းခြင်း၏ပုံသေမျက်နှာပြင် (die parting line တွင်တိုင်းတာသည်) နှင့် (ခ) သေတ္တာထဲသို့သတ္တုကိုထည့်သွင်းရန်အသုံးပြုသောဖိအားဖြင့်အုပ်ချုပ်သည်။ စက်အများစုသည်သော့ခတ်မှုရရှိရန်ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါ (တစ်ခါတစ်ရံလေဖိအား) မှလုပ်ဆောင်သော toggle type ယန္တရားများကိုအသုံးပြုသည်။ အခြားသူများကတိုက်ရိုက်သရုပ်ဆောင်ဟိုက်ဒရောလစ်ဖိအားကိုအသုံးပြုပါ။ ဘေးကင်းလုံခြုံသောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုစနစ်များကိုသွန်းလောင်းခြင်းသံသရာအတွင်းသေဆုံးခြင်းကိုမဖွင့်ရန်အသုံးပြုသည်။
သေးငယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ပုံသွန်းသောအသေခံစက်များသည်သွန်းသောသတ္တုများကိုသေတ္တာထဲသို့ထည့်ရန်အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းတွင်အခြေခံကျသည်။ ဤရွေ့ကားခွဲခြားဖော်ပြခြင်းနှင့်ပူသို့မဟုတ်အအေးအခန်းထဲကသွန်းလောင်းသောစက်များအဖြစ်ဖော်ပြကြသည်။
စံသတ်မှတ်ချက်အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ သင်၏လိုအပ်ချက်များအတွက်မည်သည့်သွန်းလောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ပုံသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းပြောပြရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက Minghe ၏အထွေထွေ Die Casting Design Data Sheet တွင်ကြည့်ပါ။
Die Casting ဆိုတာဘာလဲ
Die Casting သည်သတ္တုသွန်းခြင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်မှို၏အခေါင်းပေါက်ကို အသုံးပြု၍ သွန်းသောသတ္တုများကိုမြင့်မားသောဖိအားပေးခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ မှိုများကိုများသောအားဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသောသတ္တုစပ်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကိုဆေးထိုးမှိုအတန်ငယ်ဆင်တူသည်။ အဓိကအားဖြင့်သွပ်၊ သံ၊ ကြေးနီ၊ လူမီနီယမ်၊ မဂ္ဂနီစီယမ်၊ ခဲ၊ သံဖြူနှင့်ခဲ - tin သတ္တုစပ်များ၊ သေဆုံးသည့်ပုံပေါ် မူတည်၍ အအေးခန်းသေသည့်သတ္တုများပုံသွန်းလောင်းစက်သို့မဟုတ်ပူပြင်းသည့်အခန်းသေသည့်သတ္တုများပုံသွန်းစက်များလိုအပ်သည်။
“ gravity die casting” ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည်မြေထုဆွဲအား၏ခေါင်းအောက်ရှိသတ္တုပုံသွန်းသည့်သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းကိုယူအက်စ်နှင့်ကနေဒါတွင်ပုံသေပုံသွင်းခြင်းအဖြစ်လူသိများသည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့“ သေသောသတ္တုများပုံသွန်းခြင်း” ဟုခေါ်သည့်အရာသည်ဥရောပ၌“ ဖိအားပေးသောသွန်းခြင်း” ဟုသိကြသည်။